250A Qalabka Alaabada Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha | Shiinaha 250A Cable Accessories Warshad
25kV 250A isku xira Toos
Anhuang oo ku takhasusay isku xiraha toosan, waxaan siineynaa isku xiraha Tooska ah oo tayo sare leh. Astaamaha: ● Waxay bixisaa isku xirnaan kala go'an oo si buuxda loo baarey oo gebi ahaanba la geyn karo marka lagu dhejiyo duurka ama fiilada saxda ah. Point Meel tijaabo ah oo la dhisay si loo go'aamiyo heerka wareegga ama lagu rakibo tilmaame cillad leh. ● Looma baahna shuruudaha nadiifinta wajiga ugu yar. Kordhintu waxay noqon kartaa mid taagan, jiif ah, ama xagal kasta oo u dhexeeya. Codsiga: • Ku xirnaanta fiilada polymeric-ka ee loo yaqaan 'transformers', qalabka wax lagu beddelo, mootooyinka ...
25kV 250A Load jebi xusulka isku xira
Anhuang oo ku takhasusay Loadbreak xusulka isku xira, waxaan siineynaa Loadbreak xusulka isku xira tayo sare leh. Noocyada: l Waxay bixisaa isku xirnaan kala go'an oo si buuxda loo baaray oo si buuxda u dhex geli kara markii lagu dhejiyo duurka ama fiilada saxda ah. l Barxad lagu xiro barta tijaabada si loo go'aamiyo heerka wareega ama lagu rakibo tilmaame cillad leh. l Looma baahna shuruudaha nadiifinta wajiga ugu yar. l Kordhinta waxay noqon kartaa mid taagan, jiif ah, ama xagal kasta oo u dhexeeya. Codsiga: l Xiriirinta fiilada polymeric ee loo yaqaan 'transformers', swi ...
25kV 250A dahaaran daboolka difaaca
Anhuang oo ku takhasusay Cap-ka Difaaca Dahaaran, waxaannu siineynaa Cap tayo sare leh oo dahaaran. 25kV 250A Dahaarka Difaaca Daaha waa qalab qalab loogu talagalay in lagu xiro korantada oo si farsamaysan loogu xiro xamuulka kala jejebinta wejiyadaha dhexdooda. Markaad ku dhegsan tahay sheyga jebinta rarka iyo siligga bullaacaddu dhulka ku dhegsan tahay, Daboolka Difaaca Dahaaran wuxuu bixiyaa dabool dhammaystiran oo gaashaaman, oo lagu dabooli karo keymaha tamarta leh. Daboolka Dabaysha ee Daaqada leh ayaa loo isticmaali karaa mid joogto ah ama ku meel gaar ah ...
25kV 250A oo la dheereeyay Qalabka Bushing oo leh goono
Anhuang oo ku takhasusay Qalabka Dheeriga ah, waxaan siinaa tayo sare leh Qalabka dheereynta. Hordhac: 25kV 250A Apparatus Bushing waxay bixisaa isku xirka isku xira 200A Cable oo inta badan loo adeegsado qalabka saliida-dahaaran (R-temp, hydrocarbon, ama silikoon) qalabka, oo ay kujiraan qalabka wax lagu beddelo, qalabka wax lagu beddelo, iyo qalabka wax lagu xiro. Qalabka loo yaqaan 'bushing bushing' waxaa lagu qaabeeyey iyadoo la isticmaalayo Epoxy Rubber tayo sare leh, wuxuu buuxiyaa shuruudaha heerka EN50180 / EN50181 DIN47636 / HN52-S-61. Qalabka ku jira: arat Qalabka bushi ...
25 kV 250A Qalabka Bushing
Jaangooyo: ● DIN 47636-7-1990 Fiilo koronto leh koonto dheereeya, oo kala go'an, oo leh Um ka hooseysa 35kV cabbirka aaladda isku-xidhka ah IEEE. IEC60502 Fiilooyinka korantada laga soo saaray ee korantada laga soo saaray oo leh danab lagu qiyaasay 1 kV (Um = 1.2 kV) ilaa 30 kV (Um = 35 kV) iyo lifaaq; Methods IEC61442 Hababka tijaabada ee loogu talagalay qalabka loogu talagalay fiilooyinka korontada oo leh danab lagu qiyaasay 6kV (Um = 7.2kV) ilaa 30kV (Um = 35kV); GB 12706-2002 Xayeysiin ...